Savorovoro tany Ambovombe :: Voatazon’ny zandary ny depiote Milavonjy Philobert • AoRaha
Savorovoro tany Ambovombe Voatazon’ny zandary ny depiote Milavonjy Philobert
Tazonina ao amin’ny tobin’ny zandarimaria, any Taolagnaro, ny solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy, tany Ambovombe, Milavonjy Philobert rehefa nokarohina taorian’ny savorovoro niteraka fahafatesana olona tao amin’ny tsenan’i Berary, tany Ambovombe, tamin’ny alarobia lasa teo. Nanomboka tamin’ny alakamisy ity olom-boafidy ity no miatrika ny famotorana ataon’ny mpitandro filaminana niaraka tamin’ny lefitry ny ben’ny tanàna roa lahy, omaly maraina.
Misesisesy ny fisamborana any Ambovombe sy Taolagnaro taorian’ny tranga fifandonana teo amin’ireo andian’olona nanakana an’ireo manampahefana sy ny mpitandro filaminana tamin’ny fandravana ny tsenan’i Berary any Ambovombe Androy, tamin’ny alarobia lasa teo.
« Ho fiarovana ny ainy no antony tsy nitondrana an’io olom-boafidy io any Ambovombe. Efa mandeha ny famotorana azy, nanomboka omaly. Voampanga ho nitarika fikomiana sy nanao famoriambahoaka tsy nahazoana alalana no sady mitam-piadiana, fanoherana fanatanterahana didim-pitsarana izy. Nosamborin’ny zandary ihany koa ny lefitry ny ben’ny tanànan’Ambovombe androany », hoy ny loharanom-baovao avy amina manampahefana iray ao amin’ny faritra Androy, omaly.
Taorian’ny didim-pitsarana nivoaka no nirosoana tamin’ny fanesorana an’ireo olona monina tsy ara-dalàna teo amin’iry toerana antsoina hoe Berary iry. Nisy ny fifampitifirana tamin’ny basy izay nahafaty olona roa, araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana. Miaramila iray no voatifitra teo amin’ny kibony.
Nanazava momba an’ izao tranga mahavoasaringotra an’ilay solombavambahoaka izao Razanamahasoa Christine, filohan’ny Antenimierampirenena. « Azo atao, ny manao famotorana solombavambahoaka iray raha ivelan’ny fotoam-pivorian’ny antenimiera, araka ny voalazan’ny andininy faha-73 ao amin’ny lalàm-panorenana. Tsy azo atolotra ny Fitsarana kosa anefa izy raha tsy misy ny fahazoan-dalana avy amin’ny birao maharitry ny Antenimieram-pirenena », hoy izy.
Nanamafy hatrany ny ity filohan’ny Antenimieram-pirenena ity fa : « miala avokoa ireo fepetra ireo raha toa ka tratra ambodiomby manao fandikan-keloka ny solombavambahoaka iray ». Nohazavain-dRazanamahasoa Christine fa: « tsy tokony hisy ny fanolorana azy amin’ny Fampanoavana raha tsy misy ny fahazoan-dalana avy amin’ny birao maharitra raha toa ka tsy misy ny tranga fahatrarana ambodiomby ».
Fisafoana :: Efa-dahy tratra teo ampitaomana entana halatra
Ministeran’ny fanabeazam-pirenena :: Tale jeneraly iray sy tale roa matin’ny lozam-piarakodia